ခင်မင်းဇော်: တိမ်ရောင်စုံချိန်မှာ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း )
အမေ ဆုံးပြီးတော့ အဖေ့အတွက် အမေရေးခဲ့တဲ့ စာလေးကိုသိမ်းထားရင်း အဖေရှိနိုင်မယ့် တော်လှန်ရေးနယ်က သတင်းတွေကို ရသလောက် စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတယောက် အဆက်အသွယ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ တခုနဲ့ ဆက်သွယ်မိ ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ကျမအဖေကို သိတဲ့သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အဖေ့ကို ရှာဖို့ နယ်စပ်ဒေသကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
ကျမနယ်စပ် စခန်းတခုရောက်တဲ့အခါမှာ ကျမအဖေ သတင်းကစုံစမ်းလို့ မရတော့ပြန်ပါဘူး။ အဲဒီစခန်းတခုမှာ ကျောင်းသား ရဲဘော်တွေနဲ့ ကျမအတူနေခဲ့ရတာ ၂ နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပါတယ်။ စခန်းထဲက ကျောင်းကလေးမှာ စာသင်တဲ့ ဆရာမလုပ်ရင်းနဲ့ အဲဒီစခန်းမှာပဲ ကျမက လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် ရဲဘော်တဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပါတယ်။ စခန်းတွေတခုပြီးတခု အခြေအနေတွေအရ ပြောင်းရွှေ့ ကြရင်းနဲ့ ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ်။ ရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အဖေ့သတင်း ကို ကြားလိုက် ဆက်စုံစမ်းလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ တော်တော် ကြာသွားပါတယ်။ သိတဲ့လူတွေများပေမဲ့ မာနယ်ပလောကျပြီး ကွဲသွားတာမို့ ဘယ်ရောက်သွားတယ် ဆိုတာ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။
တနေ့ ကျမစုံစမ်းနေတဲ့ ကျမအဖေ နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နယ်စပ်ရွာလေးတရွာက လူတယောက် ရောက်လာပါတယ်။ သူက ကျမကို မြင်တာနဲ့ ဦးညိုမောင် သမီးမဟုတ်လားလို့ မေးလာပါတယ်။ ကျမက အဖေနဲ့ အတော်တူတဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျမက ဟုတ်ပါတယ် လို့ ၀မ်းသာအားရ ဆိုတော့ သူက အားတုန့်အားနာ မျက်နှာပေးနဲ့ တုန့်ဆိုင်းဆိုင်းစကား ပြောလာ ပါတယ်။ ဦးညိုမောင် ဆုံးသွားပြီ အမရယ်တဲ့။
ကျမက အံ့အားတသင့် သူ့ကိုကြည့်နေတော့ သူကဆက်ပြောပြပါတယ်။ ဦးလေးဆုံးချိန်က မဲဆောက်မှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းရဲတွေ အရမ်းဖမ်းနေတဲ့ အချိန်ပေါ့အမရယ်။ ကျနော်တို့အားလုံး တောတွေထဲမှာ သွားပုန်းနေရတယ်။ ဦးလေးလဲ ကျနော်တို့နဲ့ အတူ ပါလာတယ်လေ။ ဦးလေးကို မြို့ပေါ်မှာပဲ နေခဲ့ဖို့ပြောပေမယ့် သူက အလုပ်သမားတွေနဲ့ပဲ အတူနေမယ်တဲ့။ တောထဲမှာ ငှက်ဖျားဖြစ်တော့ ဆေးလဲမ၀ယ်နိုင် ထမင်းလဲငတ်နဲ့ အမရယ်။ နောက်ကျနော်တို့တွေ မဖြစ်ဘူး ဆေးခန်းတော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပို့ရမယ်လို့ တိုင်ပင်ပြီး ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့ ကျောင်းသားဆေးခန်းကို သွားအပို့ လမ်းမှာပဲ ဆုံးသွားတယ် အမရယ်တဲ့။ သေတဲ့ရက်ကို ကျနော် အသေအချာ မမှတ်မိတော့ဘူး အမရယ် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော်။ ဦလေးက လူကောင်းပါအမရယ်။ ကျနော်တို့ သူ့အသက်ရှင်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာ ခုထိစိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။ ဦးလေးသမီး စုံစမ်းနေတယ်လို့ သတင်းရလို့ ကျနော် အမကို မတွေ့တွေ့အောင် ရှာပြီး လာပြောပြတာပါ။ ဦးလေးအတွက် ဆွမ်းသွတ် အမျှဝေပေးလိုက်ပါ အမရယ်။
စကားတွေ မနားတမ်းပြောရင်း သူက ကျမကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ အော် အဖေ သူတို့လို လူကောင်းတွေ လက်ထဲမှာ ဆုံးပါးခဲ့ရတာမို့ ကျမ ကျေနပ်ပါတယ်အဖေ။ အဖေက ရန်သူ့ လက်အောက်မှာ အနှိပ်စက်ခံ ၊ အဖိနှိပ်ခံ နေရတဲ့ ဘ၀မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ မဟုတ်သလို ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ရောက်ရာဒေသက ကူညီဖို့ ကြိုးစားနေရင်း အဖေကိုချစ်တဲ့ လေးစားတဲ့ အဖေ့အလုပ်သမား ရဲဘော်တွေနဲ့ သေအတူ ရှင်မကွာနေရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တာမို့ သမီးဖြေသာ ပါတယ်နော် အဖေ။
အဲဒီ အလုပ်သမားလေးက ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ စာတစောင်ကို ကျမလက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးရင်း အဲဒါဦးလေး လွယ်အိတ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ စာအိတ်ကလေးပါအမတဲ့။ ကျမတို့ အိမ်လိပ်စာလေး နဲ့ အဖေ့ရဲ့လက်ရေးကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမောင်လေးက ဆက်ပြောပါသေးတယ်။ စာကို စာတိုက်က မထည့်ရဲလို့ သိမ်းထားတာ အမရဲ့ ။ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။
ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံတော်စပ်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ပါရမီဖြည့်ဖက်တွေအတွက်
ကိုယ်မကျေပွန်ခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေ အတွက် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
ရက်စွဲမဲ့ စာလေးက ကျမကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဖေက ကျမတို့ကို အမြဲသတိရနေခဲ့တာ လား။ ကျမတို့ကို ထားခဲ့ရတဲ့အတွက် နောင်တရနေခဲ့သလား။ အမေသေတာကို အဖေ သိသွားခဲ့ပါသလား။ အဖေ လိုချင်တဲ့ အဖေမြင်ချင် တဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အဖေ ပေးဆပ်ခဲ့မှု တွေ အတွက် သမီးက ဂုဏ်ယူနေတာပါ အဖေ။ ဘယ်သူတွေ အသိအမှတ်ပြုပြု မပြုပြု ။ ရန်သူကို ဘယ်တော့မှ ဘယ်လို အခြေအနေမှာမှ ဒူးမထောက် အညံ့မခံခဲ့တဲ့ အဖေဦးညိုမောင် အတွက် သမီးက အမြဲ ဂုဏ်ယူနေတယ် ဆိုတာကို အဖေ တမလွန်က သိပါစေနော်။
ကျမဆီမှာ အမေနဲ့ အဖေတို့ ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် တယောက်နဲ့တယောက်ရေးထားတဲ့ စာလေး နှစ်စောင် ခုထိရှိပါသေးတယ်။ ဘ၀မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘာအခွင့်အရေးကိုမှ ရယူမသွားပဲ တတ်နိုင်သလောက် စွန့်လွှတ်သွားနိုင် တဲ့ ကျမရဲ့ မိဘတွေက ကျမအတွက် စံပြလူသားတွေ ပါပဲ။
နိုင်ငံရေး ရာသီတွေ အမျိုးမျိုးကြားမှာ………….
သားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ နောက် ကျမတို့ တမိသားစုလုံး နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ခဲ့ပြီး အခုလို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အခြေချနေထိုင်နေပါပြီ။
ကျမတို့… ဒီကိုရောက်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာ…
ကျမချစ်ရတဲ့ အမေ့အသက်…၊ အဖေ့အသက်…၊
နောက် ကျောင်းသားတွေအသက်၊ ဘ၀၊ အနာဂါတ်၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ….
ကျမမသိတဲ့ ရဲဘော်တွေအသက်၊ ဘ၀၊ အနာဂါတ်၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ……
အညတရ အမည်မသိသူတွေ အသက်၊ ဘ၀၊ အနာဂါတ်၊မျှော်လင့်ချက်တွေ…………
အားလုံး အားလုံးကို ရင်းခဲ့ရတယ်………….
အားလုံးကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို
အခုရရှိနေတဲ့ လုံခြုံပြည့်စုံခြင်းကို….. ကျမတပ်မက်နေလို့ ရပါတော့မလား။
ကျမက ကိုယ်လွတ်ရုန်း ထွက်ပြေးခဲ့သူများလား………….
ကျမ ခုလိုပဲ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ၊ အိပ်မရတဲ့ ညတွေထဲများ.. များ...လာ……..
ကျမနဲ့ အတူ ပြည်တွင်းကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ…….
ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့ နယ်စပ်က ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ဖိနှိပ်ခံ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ………..
ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ ကျပ်တည်းလွန်းလို့ မနေနိုင်တော့ပဲ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာရှာဖွေ ရောက်ရှိလာတဲ့ နယ်စပ်တလျောက်က ကိုယ့်နိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ …
သူတို့…သူတို့ကို သတိမရတဲ့နေ့ မရှိခဲ့သလို …..
ကျမနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်တဲ့ ညတွေလည်း မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
ကျမ နောင်တရနေသလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်ဖြစ်နေလား။
ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်မဖြေရဲတော့တဲ့ ဘ၀ပါ။
၁၉ နှစ်ဆိုတာ သမိုင်းထဲမှာ လျှက်တပြက် ၊ စာကြောင်းတကြောင်းတည်းနဲ့ ဖော်ပြလို့ ရပါတယ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ဘ၀တွေမှာတော့ ၁၉ နှစ်အတွင်းမှာ………..
နိုင်ငံရေးဆိုတာ တိမ်တောင်သဖွယ် ၊ မင်းရေးကျယ်တဲ့။
အချိန်အခါအလိုက် အရောင်အမျိုးမျိုး၊ အဆင်အမျိုးမျိုး၊ ပန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုရင်………..
ကျမတို့ ပြည်သူတွေ လိုချင်တဲ့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်
အနာဂါတ်ရွှေပြည်ကြီးကို ရောက်ကို ရောက်လာမှာပါလို့ …………..
(ခုချိန်မှာ) ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ ကျမက
(ထောင်ကျဖော်၊ နယ်စပ်ခရီးတထောက်မှ ရဲဘော်ရဲဖက်၊ ချစ်သူငယ်ချင်းမ တယောက်ရဲ့ ဘ၀တစိတ်တပိုင်းကို ခံစားရေးဖွဲ့ ကြောင်း ၀န်ခံအပ်ပါသည်)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 5:27 PM
အခန်း ၄ မှာ အခန်း ၅ မပါရင် ပိုအရသာရှိမယ် အမ ရယ်... အခန်း၅ ကြောင့် အရသာ ပေါ့သွား သလိုပဲ။ အခန်း၆က ပိုဆိုး။ တကယ်က စိတ်ပါရင် ဘယ်လိုမဆို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာ တခု အချိန်တစ်ခု အလုပ်တစ်ခု ကျိန်းသေပေါက် ရှိကို ရှိပါတယ်။ ဆီတောင် အပေါက် ရှာတတ်သေးတာ။ လူက ဆီလောက်တော့ အပေါက်ရှာ တတ်ရမှာပေါ့လို့... ပေးဆပ်ခဲ့တာတွေကို မစော်ကား ပါဘူးနော်.. ခုချိန်မှာ အားလျော့တဲ့ အားမလို အားမရ အသံတွေကို အားမရ လို့ပါ။
Section4is the highest point of the story. But,...I am please to section5and6too. Thank you for sharing!
အစ်မရေ တိမ်ရောင်စုံချိန် ၁ကနေ၄အထိဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်တာ။ ဘ၀တွေကိုအေးချမ်းစေချင်လှပါပြီ။